DemoChimp: Ataovy mandeha ho azy ny Demo | Martech Zone
DemoChimp: Ataovy mandeha ho azy ny Demo
Talata, Oktobra 15, 2013 Alatsinainy Oktobra 14, 2013 Douglas Karr
DemoChimp dia ao anaty beta mihidy izao nefa mitady fikambanana izay liana amin'ny fampiasana ny serivisin'izy ireo. DemoChimp manokana ny fampisehoana vokatra, mampitombo ny taham-panovana ny tranokalanao sy ny tahan'ny fampidiranao manakaiky mandritra ny fizotry ny varotra, rehefa manangona vokatra ianao Analytics. DemoChimp dia manamboatra demo ho setrin'ny filana tsy manam-paharoa an'ny prospect tsirairay, toy ny mpivarotra manam-pahaizana manokana.
Fomba sy tombontsoa DemoChimp:
Avadiho ireo mpitsidika maro ho mpitarika - Hisoratra anarana matetika ireo mpitsidika ny tranokalanao rehefa mifandray amin'ny atiny manokana. Rehefa tonga ny fitarihanao dia azonao atao ny mahita ny ampahany amin'ny vokatrao manan-danja amin'izy ireo ary inona ny ampahany tsy mba ahafahanao manamboatra ny fanarahan-dia anao.
Masinina Demo manan-tsaina - Efa henonao ve ny fangatahana hoe: "Afaka mandefa demo ho ahy ve ianao?" Azonao atao izao, ary DemoChimp manamboatra automatique ny demo raha mamaly ny tombotsoan'ny prospect, manokana azy ho toy ny mpivarotra mivantana. Azonao atao koa ny mahita hoe iza no nizara ny demo tamin'izy ireo mba hahafahanao mahita sy mampifandray ny tontolon'ny fividianana.
Midira Demo Analytics (Demolytic ™) - Ao ambadiky ny seho, DemoChimp dia manangona angon-drakitra sarobidy mifototra amin'ny valintenin'ny prospect sy ny fihetsik'izy ireo nandritra ny demo. Antsoinay hoe Demolytics ™ ireo. Midira amin'ireo Analytics amin'ny alàlan'ny tabilao na mandehana mankany amin'ny prospect manokana.
Tags: fampiharana demosehatra demodemochimpdemossehatra fampisehoana vokatrafampisehoana vokatravarotra fampisehoanafampisehoana varotra
10 fahasamihafana eo amin'ny marketing mahazatra sy haino aman-jery sosialy
15 Okt 2013 amin'ny 8:24 PM
Misaotra an'ity. Anisan'ny vondrona fanombohana aho ary mety hahasoa amin'ny lafiny roa ny fiaraha-miasa amin'ny mpamatsy fanombohana teknolojia mety.